सडक ग्राभेललगत्तै पहिरो- प्रदेश ३ - कान्तिपुर समाचार
सडक ग्राभेललगत्तै पहिरो
भाद्र २१, २०७५ कृष्ण थापा
ल्वाङपानी (नुवाकोट) — विदुर हुँदै पुरानो सदरमुकाम तथा साततल्ले दरबार जाने ६ किमि सडक ग्राभेल गरेलगत्तै भत्किन र पहिरो जान थालेको छ ।
नुवाकोट सदरमुकाम हुँदै विदुरनगरपालिका २ पुरानो सदरमुकाम साततल्ले जाने सडक खण्डको ल्वाङपानीमा ग्राभेल गरेपछि गएको पहिरो । तस्बिर : कृष्ण
विदुरनगरपालिका २ विदुर चोकदेखि ग्राभेल बिछ्याएको सडक ल्वाङपानीमा पहिरो गएको छ । सडकमा बनाएका नाली भत्केका छन् ।
आधा दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकाय जाने उक्त सडक ठेकेदारले समयमा काम नसक्दा दुरावस्थामा छ । विदुर चोकदेखि जिल्ला प्रशासन जाने सडक ठाउँ–ठाउँमा साँघुरो र वाल उठाउनुपर्ने ठाउँमा तारजाली भरिएको छ । सडकमा खाल्डो परेको छ । छेउमा पहिरो जान थालेको छ । दैनिक ५ सय सवारी गुड्छन् ।
‘खाल्डो परेको सडकमा मोटरसाइकल चलाउन मुस्किल छ,’ विनपा २ भुटोलका स्थानीय अनुप खड्काले भने, ‘नुवाकोट बजार पुग्ने ठाउँमा गाडी उक्लिन मुस्किल पर्छ ।’ यही सडक हुँदै विदुरचोकदेखि पुरानो सदरमुकाम नुवाकोट साततल्ले दरबार, नुवाकोट भैरवी, कालभैरव देवस्थल, फलाँटे, चोगते, लच्याङ, उर्लेनी र रसुवाको सरमथलीसम्म बस, खाद्यान्न बोक्ने गाडी, ढुवानी सामग्री लैजाने मूल सडक हो ।
उक्त सडक नुवाकोट अदालत, नापी, मालपोत, जिल्ला प्रशासन, बाल कल्याण समिति, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्मारक तथा दरबार हेरचाह कार्यालय जान्छ । ०२८ सालमा नुवाकोट डाँडाबाट सदरमुकाम तल विदुरमा सारिएपछि आवतजावत गर्न ०२९ मा पुरानो सदरमुकामसम्म जाने कच्ची सडक निर्माण गरिएको थियो ।
डिभिजन सडक कार्यालयले ०५३ सालमा ओटासिल प्रविधिबाट नुवाकोटको साततल्ले दरबार जानका लागि पिच गरेको थियो । उक्त सडक दुई वर्षदेखि फराकिलो र स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता गरिए पनि द्रुतस्तरमा काम भएको छैन ।
ठेकेदार कम्पनीले ०७२ असोज २८ मा ८ करोड ८० लाख ३९ हजारमा ठेक्का सम्झौता ०७४ असोजमा बुझाउने सहमति थियो । पटक–पटक म्याद थपेर अहिलेसम्म सडक काम पूरा भएको छैन ।
प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०८:४६
पुलको पिच उप्कियो
फलामे बेलिब्रिजमा ठडयाइएका पाता, नट–बोल्टहरूमा खिया
भाद्र २०, २०७५ कृष्ण थापा
त्रिशूली (नुवाकोट) — पाँच दशकभन्दा अघि निर्माण गरिएको त्रिशूली नदीमाथिको पुल जोखिममा छ । पुलमाथि गरेको पिच चार ठाउँमा प्वाल परेको छ । वर्षाले पिच उप्केको छ ।
उक्त फलामे बेलिब्रिजमा ठडयाइएका पाता, नटबोल्टहरूमा खिया लागेका छन् । क्षमताभन्दा बढी भारवहन सवारी पुल हँुदै आवतजावत गर्छन् ।
सुरुमा ८ टन भार क्षमता भएका गाडी गुड्थे । अहिले ४० टनभन्दा बढी सामान लिएर गाडी गुड्ने गरेको विदुर नगरपालिका १ ढुंगेका स्थानीयवासी तथा जिसस सदस्य गणेश शाहीले बताए । ‘पुल एकदमै जोखिममा छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि बेला पुलमा ठूलो दुर्घटना
हुन सक्छ ।’ वैकल्पिक व्यवस्था गरेर नयाँ पुल हाल्न स्थानीयको माग छ ।
पुल बनाउन त्रिशूली जलविद्युत् गृह छेउको जग्गा लिने तयारी भए पनि सुरु भएको छैन । पुलको वारि र पारि पक्की घरैघर बनेका छन् । पुल जीर्ण भइसकेको छ । पुलमा दैनिक सानाठूला गरी ६/७ सय सवारी साधन आवतजावत गर्ने गरेको ट्राफिक कार्यालय प्रमुख शम्भुबहादुर अधिकारीले बताए । ‘पुल एकदमै जोखिममा छ,’ ट्राफिक कार्यालय प्रमुख अधिकारीले भने, छिटै विकल्प नसोचे दुर्घटना हुन सक्छ ।’
यही पुल हुँदै किस्पाङ, मेघाङ, त्रिशूली कोलनी बजार, त्रिशूली पुरानो बजार, नयाँ बजारस्थित स्थानीय, कर्मचारी र यात्रु आजतजावत गर्छन् । २०१८/१९ सालमा हालिएको झोलुंगे पुल बाढीले बगाएपछि यो पुल २०२० सालमा बनाइएको थियो ।
त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाले २०१६–१९ सालमा काठमाडौं–त्रिशूली सडक ट्रयाक निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेपछि उक्त पुल निर्माण गरेको हो । २१ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा भारतीय सहयोगमा उक्त बेलिब्रिज हालिएको थियो ।
प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०७:२८
थप केही प्रदेश ३बाट
दोलखामा ‘रोपाइँ समिति’
सट्टेबाजीको आरोपमा नगदसहित पक्राउ
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै रुष्ट
धादिङमा ८ को नीति तथा कार्यक्रम
तोकिएको मितिमा आएन
दुई नगरपालिकाको कृषिमा जोड
सम्पादकीय असार ११, २०७६
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा सोमबार शीतल निवासमा राजनीतिक दलका प्रमुखहरूबीच गरेको उच्चस्तरीय अन्तर्क्रियामा सत्तारूढ नेकपा अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्री आफैं उपस्थित थिए । निर्वाचन समीक्षा...
तरंगमा सत्तारूढ नेकपा
किशोर नेपाल असार ११, २०७६
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकताको समय हर्षोल्लासपूर्ण थियो । अन्ततः देशलाई सदियौंदेखिको सामन्तवादी जकडबाट मुक्त गर्न नेताहरू सफल भएका थिए । नेकपाको गठन भएको थियो ।...
सीपमूलक शिक्षाको मार्गचित्र
सुरेशराज शर्मा असार ११, २०७६
नेपालमा प्राविधिक–व्यावसायिक तालिम दिने संस्थालाई सैद्धान्तिक ज्ञान दिने शिक्षालयजस्तै गरी चलाउने गरिएको छ, जुन उचित होइन । सञ्चालक समितिमा उत्पादन क्षेत्रका प्रतिनिधि राखिदिएर मात्र पुग्दैन । पाठ्यक्रम...
राजनीतिक आकाशमा कालो बादल
हरिबोल गजुरेल असार ११, २०७६
नेपालमा पटक–पटक भएका शान्तिपूर्ण र सशस्त्र पुँजीवादी जनवादी संघर्ष सम्झौतामा टुंगिँदै आएका छन् । २००७, २०३६, २०४६ मा सशस्त्र संघर्ष र जनआन्दोलनबाट जनताले प्राप्त गरेका सीमित...
छुवाछूत सर्‍यो सामाजिक सञ्जालमा
मधु शाही असार ११, २०७६
केही दिनअघि म नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका पुगेकी थिएँ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेलसँग कुरैकुरामा सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रसंग निस्कियो । प्याकुरेलले भने, ‘आरक्षण दलितलाई होइन, गरिबलाई दिनुपर्छ ।’...
'क्लिन फिड’ विरुद्ध अनक्लिन व्यवहार
सम्पादकीय असार १०, २०७६
संसद्मा विचाराधीन विज्ञापन विधेयकको विरोधस्वरूप केबल टेलिभिजन व्यवसायीले सोमबार चौबीस घण्टाका लागि विदेशी च्यानल प्रसारण रोकिदिएका छन् । विधेयक पारित भई ऐन बने सरकारले विदेशी विज्ञापन...
'मुठभेड’ को रूपकविरुद्ध
सरिता तिवारी असार १०, २०७६
नेकपा (विप्लव) का सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्यापछि ‘मुठभेड’ केवल एउटा शब्द होइन, सरकारी रणनीतिको रूपकका रूपमा फेरि एक पटक दोहोरिएको छ । सत्तारूढ दलकै...
सत्ता, प्रतिपक्ष र संसदीय अभ्यास
टीकाराम भट्टराई असार १०, २०७६
गत साताका केही संसदीय अभ्यासले संसदीय मूल्य–मान्यता र मर्यादाको सीमा नाघे । संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न गरिएको अवरोधपश्चात् संसदीय मर्यादामा प्रश्न उठेको छ । हुन त प्रतिपक्षले विगतमा...
कहाँ खेल्नु ? कहाँ कुद्नु ?
सम्झना वाग्ले भट्टराई असार १०, २०७६
मुस्किलैले चार आनामा बनेको घरमा बस्छु म । यस क्षेत्रका सबैजसो घर यस्तै छन् । साँघुरो सडक, तर असीमित गतिमा कुद्ने मोटरसाइकल र गाडीहरू । सवारी साधनको गति तथा ध्वनि...
ग्रेडिङको गह्रौं भारी
हरिहर तिमिल्सिना असार १०, २०७६
एसईईको नतिजाको मौसम छ । अभिभावकले आफूले पूरा गर्न नसकेका सपना छोराछोरीको दिमागको ब्याडमा रोप्ने समय पनि यही हो । विद्यार्थीलाई विषय छान्ने र शिक्षालयलाई विद्यार्थी तान्ने...